आईफोनमा फेसबुक अनुप्रयोगबाट फोटोहरू डाउनलोड गर्ने तरिका आईफोन समाचार
आईफोनमा फेसबुक अनुप्रयोगबाट फोटोहरू डाउनलोड गर्ने तरिका
यदि हामी हाम्रो फेसबुक खाता दैनिक प्रयोग गर्छौं भने, निश्चित रूपमा ऊबको केही क्षणमा, हामीले मार्क जुकरबर्गको सामाजिक नेटवर्कमा अपलोड गरेका सबै फोटोहरू एक चोटि हेरेका छौं। कहिलेकाँही हामी फोटोग्राफ गर्न सक्दछौं जुन कारणले हामी छाप्न चाहन्छौं तर हामी यो याद गर्दैनौं कि हामीसँग त्यो क्षणमा यो कहाँ भण्डार गरिएको छ र खोज्नको लागि सुरु गर्न धेरै लामो समय लाग्दैन, त्यसैले उत्तम विकल्प भनेको यसलाई सिधै हाम्रोबाट डाउनलोड गर्नु हो। पछि यो प्रिन्ट गर्न खाता।
प्लेटफर्ममा छविहरू अपलोड गर्दा के हुन्छ त्यसको विपरित, केही सामान्य कुरा, हामीले सामाजिक नेटवर्कमा भण्डार गरेका छविहरू डाउनलोड गर्न सक्षम हुनु एउटा जटिल कार्य हुन सक्छ र धेरै अवसरहरूमा प्रयोगकर्ताहरू सोच्दछन् कि त्यसो गर्न सम्भव छैन। तर भाग्यवस यो त्यस्तो छैन र वास्तवमा आईफोनमा हामी तपाइँलाई हामी कसरी आफ्नो आईफोनबाट यो गर्न सक्दछौं भनेर देखाउन जाँदैछौं।
सुरु गर्नु अघि, हामीले दिमागमा राख्नुपर्दछ कि यदि हामी यसलाई वेब संस्करणबाट वा अनुप्रयोग मार्फत गर्छौं भने हामी एक-एक गरेर हामीले पोस्ट गरेको फोटोहरू डाउनलोड गर्न सक्दछौं। तर यदि हामीले वेबबाट फेसबुकले प्रस्ताव गरेको विकल्पबाट प्रक्रिया पूरा गर्छौं भने, हामीले सामाजिक नेटवर्कमा अपलोड गरेको सबै सामग्री पूर्ण रूपमा डाउनलोड गर्न सक्छौं।
1 आधिकारिक फेसबुक अनुप्रयोग मार्फत फोटोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
आधिकारिक फेसबुक अनुप्रयोग मार्फत फोटोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
पहिले हामी अनुप्रयोग खोल्छौं र तल्लो दायाँ कुनामा अवस्थित बटनमा जान्छौं, तीन तेर्सो रेखा द्वारा प्रतिनिधित्व हाम्रो प्रोफाइल पहुँच गर्न।
अर्को हामी आफ्नो प्रयोगकर्तामा जान्छौं र हामी फोटो एल्बमहरूमा जान्छौं हामी कहाँबाट छवि डाउनलोड गर्न चाहन्छौं?.
एक पटक एल्बम भित्र, हामी छवि चयन गर्दछौं ताकि यो पूर्ण स्क्रीनमा प्रदर्शित हुन्छ।
अब हामीसँग छ स्क्रिनमा थिच्नुहोस् ताकि अनुप्रयोगले हामीलाई छवि डाउनलोड गर्नका लागि विकल्प देखाउँदछ।
डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यो हो। छवि हाम्रो फोटो रीलमा भण्डार गरिएको छ र अब हामी फोटोमा के गर्न सक्छौं। दुर्भाग्यवस हामी केवल फोटोहरू डाउनलोड गर्न सक्छौं तर भिडियोहरू होइन। यसको लागि हामीले हाम्रो फेसबुक खाताको सम्पूर्ण ईतिहास डाउनलोड गर्न सहारा लिनुपर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » आईफोनमा फेसबुक अनुप्रयोगबाट फोटोहरू डाउनलोड गर्ने तरिका
अँ साञ्ची। धेरै जटिल। मलाई थाहा छैन म यो सहयोग बिना के गर्थें। कस्तो नवीनता
हाहा मँ तपाईको पोष्टको आलोचना गर्न मन पराउँदिन, तर आयो यार, यो कूल स्टफिंग हो…।
एलेक्स Xhembe भन्यो
एक क्षणको लागि मैले सोचे कि यो मजाक हो, आऊ, मैले पूरै पोष्ट पढेको छु यो आशा गरेर।
त्यहाँ वास्तवमा केहि व्यक्तिहरू छन् जुन फेसबुकबाट फोटो डाउनलोड गर्न थाहा छैन?
एलेक्स झेम्बेलाई जवाफ दिनुहोस्
जर्ज ग्रास भन्यो
यो ठट्टा सही छ?
जर्ज ग्रासलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाइँको विवरण को लागी धन्यवाद। मेरो केसमा मलाई यो पहिले नै थाहा थियो तर मलाई लाग्छ कि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसलाई यो कसरी गर्ने भन्ने बारे कुनै विचार छैन। आलोचना योगदानको भन्दा ईर्ष्याको हो। अभिवादन
धेरै धन्यवाद !! यसले मलाई मेरो भूतपूर्वको फोटोहरू प्रतिलिपि गर्न धेरै मद्दत गरेको छ।
के तपाईं अर्को ट्यूटोरियल बुझाउन सक्नुहुन्छ कि म कसरी आफ्नो आईफोन S एस प्लस १२6 गिगमा ब्यालेन्स माथि राख्न सक्छु? मैले सोचेँ कि १२128 गिगको साथ ब्याट्री लामो समय सम्म रहनेछ। र अर्को जान्नको लागि म कसरी फोनबाट कल गर्न सक्छु, कति मोबाईल केवल व्हाट्सएप को उपयोग गर्न को लागी ...
म केवल छवि होल्ड गर्दछु, मेनू देखा पर्दछ, फोटो बचत गर्नुहोस् र रिल गर्नुहोस्
Javivi लाई जवाफ दिनुहोस्
र तपाइँ किन जान्न चाहानुहुन्छ कि हे अभिवादन
Kfkcc लाई जवाफ दिनुहोस्
लेखकले पेशा बदल्नु पर्छ
Jgidif लाई जवाफ दिनुहोस्
म भन्छु भन्यो
र मलाई अचम्म लाग्छ, फेसबुक प्रोफाइलको नामलाई स्क्रिनसटहरूमा लुकाउन यति धेरै प्रयास किन गर्नुहुन्छ यदि तपाई त्यसोभए लेखमा तपाईको नामले शान्तपूर्वक हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ?
DigoYo लाई जवाफ दिनुहोस्
यस बकवासले यस पृष्ठलाई अनुयायीहरू हराउने बनाउँदछ जब म ठूला भाई अनुप्रयोगको सिफारिश गर्दछु